Best Chinyararire & Container Rudzi Gesi jenareta Set Mugadziri uye Fekitori | Naipute
Chinyararire jenareta Set
Segadziriro yemagetsi yekupa magetsi network, chinyararire jenareta seti yave ichishandiswa zvakanyanya nekuda kweruzha rwavo, kunyanya muzvipatara, mahotera, nzvimbo dzekugara dzakakwirira, nzvimbo dzekutengesera hombe uye dzimwe nzvimbo dzine zvimiro zvine mutsindo zverunyararo zvakakosha midziyo. Kune akakwirira-emagetsi mayuniti nekuda kweruzha rukuru, huwandu hwakawanda chete hwekudzora ruzha hunogona kuita ruzha rweyuniti kusangana nezvazvino kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Nechikonzero ichi, kambani yedu yakashandisa yakawanda zviwanikwa zvevanhu uye zvigadzirwa kugadzira rakanyarara bhokisi riine ruzha kudzikisira kuita.
Izvi zvinoponesa vatengi mari yakawanda yekuvaka imba yejenareta, nokudaro ichideredza mapurojekiti ekuderedza ruzha mukamuri rejenareta.
Zvimiro zve akanyarara jenareta seti
1. Nemaitiro akanaka ezasi eruzha, anogona nenzira kwayo kudzikamisa ruzha rwejenareta seti.
2. Iyo yakanyarara gasi jenareta seti ine compact dhizaini, kuisirwa nyore, kutaridzika kwakanaka, uye akasiyana mavara anogona kugadzirwa.
3. Shandisa multilayer inodzivirira impedance mismatch mhando acoustic yakakomberedzwa, hombe impedance inoumbwa muffler.
4. Shandisa yakakwira-inoshanda ruzha kudzikisira yakawanda-chiteshi mweya yekudyiwa uye pedza chiteshi kuona kuti unit ine yakakwana simba kuita.
5. Iko kushandiswa kweiyo yakasanganiswa michina iri nyore kune yekupedzisira kugadzirisa.
Mudziyo mhando gasi jenareta yakatarwa
Mudziyo gasi jenareta yakatarwa inotora chimiro chakakomberedzwa, icho chinogona kusangana nezvinodiwa zvekusimudza, kubata uye mashandiro euniti.
Musuwo wedare remakurukota unotora dhizaini isina mutsindo, uye yemukati yekupisa yekudhiraidhi yekabati inotora zvakatipoteredza zvinhu zvine moto-zvinodzora zvinhu, zvine mabasa ekuchengetedza kupisa uye kupisa kupisa uye kudzikisira ruzha.
Bhokisi remuviri rakagadzirwa neanoputika-chiratidzo DC 24V mwenje mwenje, uye kwakakurudzira mesh ndiro yakaiswa pamadziro emukati, uye yakapendwa, uye pamusoro pacho pakatsetseka uye pakanaka.
Pamusoro pebhokisi muviri wakaputirwa neanti-ngura pendi yemuchina wechiteshi, iyo inogona kudzivirira mwando, ngura, zuva uye munyu spray.
Iyo kabati nzvimbo dhizaini yeyuniti inosangana nezvinodiwa zvezuva nezuva rekuchengetedza nzvimbo pamativi matatu nepamusoro. Kune manera ekukwira, ekuongorora uye ekuchengetedza magonhi, ekumisa zvechimbichimbi zvigadzirwa, mabhokisi etsvina, uye mabhaudhi ekumisikidza kunze kwebhokisi.
Iyo inokodzera nzvimbo yekunze yekushanda, uye inogona kunaya mvura, guruva-chiratidzo, kupisa kupisa, kupisa moto, kupisa ngura uye chando-chiratidzo.
Pashure: Chigadzirwa Magadzirirwo E10 Kw LPG Gesi Jenereta
Zvadaro: Zvingakudetsera zvishongedzo
Chigadzirwa Magadzirirwo E400KW Biomass Gesi Ge ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E1000KW Gesi reKwayedza / ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E30 KW Natural Gasi / ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E200KW Natural Gasi / ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E50KW Natural Gasi / Bi ...